admin | Kyauk Phyu Special Economic Zone
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန် နေရာ (၃)ခုရှိသည့်အနက် (၁)ခုဖြစ်သည့် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်တည် ဆောက်ရန်အတွက် ပထမအဆင့်အနေနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ (၂၀၁၄) တွင် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ထောင်ခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်သတ် မှတ်ခြင်း အဆင့်ဆင့်ကို ၊ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် စတင် ကျင်းပသည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ အတည်ပြုချက် ရယူရန် တင်ပြခဲ့ရာ အစည်းအဝေး(၂၁)ရက် မြောက်နေ့ (၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်) တွင် အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂။ … Continue reading →
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို Europe Business Assembly (EBA) မှ ချီးမြှင့်သည့် International Flag နှင့် Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် The Prime Business Destination Forum တွင်တက်ရောက် လက်ခံရယူခဲ့
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို Europe Business Assembly (EBA) မှ ချီးမြှင့်သည့် International Flag နှင့် Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် The Prime Business Destination Forum တွင်တက်ရောက် လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Forum ကို ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ကန်းမြို့ရှိ၊ Carlton Intercontinental ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားအား နံနက် … Continue reading →
Invitation for the Expression of Interest (EOI) From the Potential Developers
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has identified KyaukPhyu SEZ as one of the economic potentials to contribute to the country’s economic development. Bid Evaluation and Awarding Committee (BEAC), in close cooperation with the CPG Consortium … Continue reading →
Kyauk Phyu SEZ Yangon Road Show into the mitv News
The Kyaukphyu Economic Zone is set to be the trade corridor of Myanmar, with Africa, Middle East and China, but while investors are being invited, people hope the development to be open and transparent. The KyaukPhyu SEZ covers 4000 acres … Continue reading →
KPSEZ Yangon Road Show MRTV News
Signing of Letter of Agreement on 26 May 2014 in Naypyitaw
The Myanmar press reported on the signing of an agreement between the consortium, led by CPG Consultants and PM Link, and the Kyauk Phyu Special Economic Zone Management Committee for the development of the master plan and management of the … Continue reading →
The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ
The draft master plan of Kyauk Phyu SEZ was consulted with the local people, Kyauk Phyu’s Town Hall meeting
Signing Ceremony for Consultancy Services Agreement between Kyauk Phyu SEZ Management Committee and Consulting Frims Consortium led by CPG Consultants Pte Ltd